Duqa Muqdisho oo laamaha dowlada hoose faray ka hortaga saamaynta fatahaada - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Duqa Muqdisho oo laamaha dowlada hoose faray ka hortaga saamaynta fatahaada
Duqa Muqdisho oo laamaha dowlada hoose faray ka hortaga saamaynta fatahaada
November 26, 2019 Duceysane586
Duqa Muqdisho Ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) oo kormeeray xaafadaha ay sameeyeen roobabkii ka da’ay Caasimadda ayaa faray laamaha Dowladda Hoose iyo waaxyaaha gurmadka degdegga ah in ay u istaagaan ka hortagga dhibaatooyinka binu aadan tinimo ee xilliyada roobabka soo food saara dadka danyarta ah.
Guddoomiyaha ayaa kormeeray degmooyinka Boondheere, Shangaani, Xamarweyne, Wadajir, xamar Jajab iyo isgooska nambar afar
,isagoo kala qeyb qaatay laamaha gargaarka degdegga ah ee Dowladda Hoose iyo bulshada ku dhaqan Waaxda Yuusuf Alkowneyn ee Degmada Boondheere samata bixinta qoys uu ku soo dumay gurigoodo.
Guddoomiye Cumar Filish oo ka dhageystay bulshada degmooyinka uu kormeeray xaaladdooda nololeed ayaa kula dardaarmay in ay si dhow isaga warhayaan, gacanna u fidiyaan qooysaska ay roobabku waxyeelyeen.
Duqa Muqdisho ayaa tilmaamay sida ay uga go’an tahay Maamulka Gobolku in ay ka shaqeeyaan yareynta xaaladda binu aadantinimo ee soo food-saarta dadka danyrata ah, xilli roobaadka, qorshahaas oo ay muhiim tahay in gacan ka geystaan qeybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan ganacsatada iyo ururrada samafalka.
Dhanka kale, Guddoomiyaha ayaa amray in la dardar geliyo howlaha faya-dhowrka Caasimadda, degdegna ay howlwadeennada Dowladda Hoose uga shaqeeyeen sidii loo furi lahaa marinnada halbowlaha u ah isu socdka bulshada, loona yareeyo saameynta biyaha qulqulaya ay ku leeyihiin nolasha iyo bilicda Caasimadda.
Booliska soomaaliland oo xiray 9aal nin oo dalka Imaaraatka u dhashay
Ciidamada Kenya oo la wareegay Amaanka madaxwayne ku xigeenka Jubaland
Diblomaasiyiinta Qunsuliyadda Soomaaliya ee Jiddah oo degdeg loogu yeeray
February 7, 2019 February 8, 2019 Cali Yare
September 3, 2019 Duceysane